Madaxweynihii hore ee Soomaaliya”Dowlada farmaajo waa inay dalka ku hogaamisaa doorasho qof iyo cod ah … – Shalambood News
Home/Wararka/Madaxweynihii hore ee Soomaaliya”Dowlada farmaajo waa inay dalka ku hogaamisaa doorasho qof iyo cod ah …
Ibra Abu October 16, 2018
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowlada federalka Soomaaliya inay ku hogaamiso wadanka doorashada qof iyo codka ah sanadka 2020ka isagoo ka digey haddii aysan taasi dhicin in dalka uu galayo xaalad xasilooni la’aan ah.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga wareesta marxalada siyaasadeed ee uu dalku marayo iyo rajada laga qabo iney dhacdo doorasho qof iyo cod sanadka 2020, asaga oo ku sugan magaalada London ee cariga ingiriiska.
“Dowlada haddii aysan ku hogaamin dalka doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020ka waxaa ku imanaya dalka culeys, waxaan ka sugeynaa dowlada in ay hogaamiso, qaabeyso oo ey fududeyso doodahaas weliba si deg-deg ah haddii aysan fududeyn qeylo iyo buuq ayaa ku imanaya dalka.” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya.
Mar wax laga weydiiyay sida uu u arko in dowladu yeelato mucaarad ayuu yiri Xildhibaan Xasan Sheekh; “Mucaaradka maslaxad weyn ayaa ugu jirta dowladnimada waayo waa muraayad ay isku aragto dowlada inay qurxoon tahay iyo inkale,”
“Mucaaradu ma xuma wax ay tilmaamayaan haddii ay sax yihiin dowlada waa inay saxdaa haddii aysan sax ahayna waxaa wanaagsan inay dowlada u yeerto mucaaradka la fariisato isla markaana qanciso haddii ay waxa ay ku dhaliileen uusan ahayn mid sax ah.”ayuu sii raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud.
1 thought on “Madaxweynihii hore ee Soomaaliya”Dowlada farmaajo waa inay dalka ku hogaamisaa doorasho qof iyo cod ah …”
Asaga intiisii wax wuu qaban waayaye maxaa ka galay mida Madaxweyne farmaaajo